IPhone XR Kushambadzira Campaign Inokwira Kumusoro | IPhone nhau
Kushambadzira Campaign ye iPhone XR inowedzera
Uye ndezvekuti muApple ivo vari pachena kuti ndicho chigadzirwa chavanofanira kusimudzira kukurudzira kutengesa uye zvimwe izvozvi zvavari kudzikisa mitengo mune dzimwe nyika dzakaita seChina kana Japan. Mune ino kesi, vamwe vaongorori vari kuti idzi iPhones dzinogona kudonhedza zvakanyanya mumutengo uye mishandirapamwe yeApple kwatiri yekutenga iyi modhi iri kuwedzera.
Kubva kune veCompertino vakomana 'webhusaiti, vatengi vanopihwa mukana we chinjana ako ekare mamodheru e iPhone kune iyo nyowani iPhone XS kana XR nechakakodzera dhisikaundi, asiwo kambani iri kutumira maemail akati wandei kune vatengi kuvakurudzira kuti vachinje.
Mushandirapamwe uyu unosimbisa kuburikidza neemail yevashandisi vayo
Vamwe vashandisi vari kugamuchira meseji kubva kuApple ne iPhone XR kukurudzira kubva $ 549 sezvaungaona mumufananidzo pazasi. Chokwadi ndechekuti mushandirapamwe uyu uri kunyanya kusimbirira uye zvinoita sekunge Apple iri kuwedzera kucherechedza kumanikidzwa kwevezvenhau, vaongorori, vanoita zvemari uye vanosvinwa nemishandirapamwe yekutengesa yakadai kutengesa yakawanda iPhone XR.
Mune ino kesi, zano raApple riri nyore uye rakanangana, rinoratidza mumufananidzo zvakanakira iyo nyowani modhi yakapihwa Nyamavhuvhu apfuura uye yakanangiswa zvakananga kune avo vashandisi vane yekare iPhone. Vazhinji vashandisi vari kugamuchira aya maemail vangave vashandisi vane yavo iPhone 6, 6S, 7 kana 7S, asi isu hatisi kutonga kuti kushambadzira kunovhurwa kune vamwe vashandisi vane Apple ID. Mune yangu nyaya, hapana chakasvika kwandiri asi zvinokwanisika kuti vamwe venyu vakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Xr » Kushambadzira Campaign ye iPhone XR inowedzera
Isu takaedza Just Mobile's TENC Mhepo uye Xkin 3D zvishandiso zveiyo iPhone XR
Wekupedzisira mutungamiriri weKeKKit uye zvese zviripo zvishandiso